Salon des Etudes Supérieures -Madajeune Hifarana anio etsy Mahamasina
Hifarana anio zoma etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina rehefa naharitra roa andro ilay “Salon des études supérieures” andiany faha-15, karakarain’ny Madajeune.
Sekoly ambony manodidina ny 70 isa no mandray anjara ao, ahitana lalam-piofanana an-jatony entina hanampiana ireo tanora vao afa-panadinana Bakalôirea. Anisan’ny tena nampiavaka ity hetsika ity raha ny fanazavan’Atoa Lahatra Andriamahatsangy ny fisian’ireo lalam-piofanana hahazoana vatsim-pianarana mankany Maorisy. Fa ankoatra izay dia betsaka ihany koa ireo sekoly mampiranty ny fahaizany manofana tanora lahy sy vavy ho mpampivelona sy mpitsabo mpanampy na dia ho an’ireo tsy manana ny mari-pahaizana Bakalorea aza. Anisan’ireny ny Inspnmad izay nambaran’Atoa Mbola Ratsiarovala, tompon’andraikitry ny serasera ao aminy fa ny 60%-n’ny fianarana ao amin’izy ireo dia fizaran’asa avokoa. Ny hahafahana manampy ny fitondram-panjakana hanaparitahana ireo mpampivelona sy mpitsabo mpanampy no tena tanjon’izy ireo hampihenana ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza eo am-piterahana.